Umatshini ojikelezayo wesikhongozeli-China abavelisi beekhonteyina abaXhasi, abaXhasi
Isakhelo soKhuseleko lweeMveliso zoLungiselelo lweMesh yokuCoca
Le ndlela ilula kwaye iguquguqukayo yamacala ama-3 enendawo yokuhlala "A" Isakhelo esityikityiweyo sikwabhekisa kwitroli yesakhelo esirhabaxa okanye kwitroli yohambo lwentambo, ilungele ukuhambisa iipakeji ezinkulu, iibhokisi kunye nezinye izinto ezinobunzima. Inika isibonelelo sokugcina indawo sokukwazi ukuwa ngokulula xa sigcinwa xa singasetyenziswa.
Itroli esindayo yomthwalo onzima wokuhambisa izinto kunye nokugcinwa, 3 macala S
Le trolley yokuhamba ngokulula kunye nokuguquguqukayo ikwabizwa ngokuba yitroli yesikhongozeli kwaye ilungele ukuhambisa iipakeji ezinkulu, iibhokisi kunye nezinye iimpahla ezinobunzima. Yakhiwe ngemibhobho yesinyithi kunye neqonga. Inika isibonelelo sokugcina indawo sokukwazi ukuwa ngokulula xa sigcinwa xa singasetyenziswa.
Itreyini esindayo yomthwalo onzima wokuhambisa izinto kunye nokuzigcina (4 Amacala)
Le trolley yokuhamba ngokulula kunye nokuguquguqukayo ikwabizwa ngokuba yitroli yokugcina impahla, okanye ugcina ikheyiji yokugcina. Ilungele ukuhambisa iipakeji ezinkulu, iibhokisi kunye nezinye izinto ezinobunzima.
Ipallet tainer yinkqubo yokuphatha yokugcina izinto eyenzelwe ukugcina izinto kwiipelethi. Sisakhiwo esomeleleyo kakhulu sokubekwa kwempahla ukuthintela ukuwa kwenkqubo. Thatha ithuba lokufumana lonke indawo yokugcina kunye ne-pallet tainer. Nokuba iimveliso ezingafakwanga zinokufakwa kwisitayile. Xa isetyenziswa. I-pallet tainer inokufakwa kwindlwana yokugcina indawo yakho yokugcina. Yinkqubo yokugcina yale mihla yokugcina iimpahla, izixhobo zokuvelisa, amaziko okuthengisa, kunye nolunye ugcino kunye nonikezelo lwezixhobo. Oko kuyonyusa uxinizelelo lokugcinwa kwezinto ezigciniweyo kwaye ke iindleko zokusebenza ziya kunciphisa ngokunjalo.
Umsebenzi onzima wocingo wokugcina ikheyi yetroli yothutho kunye nokugcinwa kwezinto (4 zecala)
Umsebenzi onzima wocingo wokugoqa ikheyhuli yetroli ixhaphake kakhulu kwindawo yokugcina izinto kunye nakwiivenkile ezinkulu. Yitroli eshukumayo esongekayo enee-casters ezine zokuhambisa nokugcina izinto.
Iingcingo zocingo zenkqubo ye-pallet racking
Lo msebenzi unzima wocingo womnatha wenzelwe ukuba usetyenziselwe ukurhweba ipallet yokuvelisa ukwenza indawo zokugcina izinto ezincinci. Kulula ukuyifaka kuphela ukuyibeka phezu komqadi ngaphandle kokulungiswa okufunekayo.
Itroli yokuhambisa umthwalo enzima yokuhambisa izinto kunye nokuzigcina (iishelufa ezi-4)
Iibhokisi ezinemigca esongiweyo yepllet yokugcina impahla
Ibhokisi enemingxunya yepallet yenziwe ngeengcingo ezihlanganisiweyo ubuncinci kwi-5mm ubukhulu kwaye ziyilelwe ukuba zisongeke kwaye zibambe ngokulula. Isetyenziselwa ukulungisa indawo yokugcina izinto, ukugcinwa okucocekileyo kunye nokukhethwa kweodolo, kunye nokuphucula ukusetyenziswa ngokukuko kwendawo yokugcina.